नेपालमा अहिलेसम्म कतिजनाको कोरोना परीक्षण गरियो ? सरकारले दियो जानकारी — Imandarmedia.com
नेपालमा अहिलेसम्म कतिजनाको कोरोना परीक्षण गरियो ? सरकारले दियो जानकारी
काठमाडौं । नेपालमा अहिलेसम्म ५ जना कोरोना संक्रमित रहेका छन् । सरकारले कोरानाको आशङ्कामा अहिलेसम्म ९ सय १७ जनाको नमुना परीक्षण गर्दा ५ जना संक्रमित फेला परेका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले अहिलेसम्म ९ सय १७ जनाको परीक्षण भएकोमा पाँच जनाको मात्रै पोजेटिभ रिपोर्ट आएको जानकारी दिनुभयो । पाँचजनामध्ये १ जना (जो चीनबाट आएका थिए) निको भएर फर्किएका छन् ।
अहिले २ जनाको टेकु अस्पताल, एक जनाको सेती प्रादेशिक अस्पताल र एक जनाको वाग्लुङमा उपचार भइरहेको छ । उपचाररत सबैको अवस्था सामान्य रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, अहिले आइसोलेसनमा १२ जना रहेका छन् । जसमध्ये शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा ५ जना, पाटन अस्पतालमा ६ र कान्ति बाल अस्पतालमा १ जना रहेका छन् ।
त्यसैबिच उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट आइतबार बिहान आएको स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण प्रदेश–प्रदेशमा पुर्याउने कार्य चलिरहेको छ । यही सामान बोकेर प्रदेश १ को विराटनगर र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीका लागि उडेको नेपाली सेनाको स्काइ ट्रक एकाएक बीच बाटोबाटै फिर्ता भएको छ । आज(सोमबार) बिहान ९ बजेर ५० मिनेटमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडेको सो विमानभित्र अनौठो गन्ध आएपछि फिर्ता भएको हो । त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका एसपी दानबहादुर मल्लले सेनाको स्काइ ट्रक बीचबाटोबाटै फर्किएको पुष्टि गर्नुभएको छ ।
चीनले कोभिड १९ को रोकथाम एवं उपचारमा प्रयोग हुने व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री, मास्क लगायतका सामानहरु नेपाल सरकारलाई आइतबार नै हस्तान्तरण गरेको थियो । नेपालस्थित चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले आईतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पुगी ती सामानहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । समस्या किन आएको भन्ने कुरा अनुसन्धान भइरहेको छ ।